Nambara ny Oppo Band: Fehin-tànana marani-tsaina vaovao miaraka amin'ny NFC ary mizaka tena 14 andro | Androidsis
Ny orinasa aziatika Oppo dia nanolotra ny tarika vaovao, fehin-tànana marani-tsaina tonga any Shina amin'ny voalohany ary tsy ho ela dia hanao izany any amin'ny faritany hafa. Ity fandefasana ity dia hamela azy hifaninana amin'ireo mpanamboatra malaza hafa toa an'i Xiaomi, Honor, Huawei na Samsung ihany.
toy ny Fijerena Oppo, la Oppo Band vaovao tonga amin'ny faritra voalohany ary azo vidiana amin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialin'ny mpanamboatra. Tarika manaitra tokoa izy io, satria manana tadiny maromaro hampiasana azy io, ny iray amin'izy ireo dia ny kinova Evangelion, kinova voafetra amin'ny famoahana azy.
1 Oppo Band, ny endriny rehetra
Oppo Band, ny endriny rehetra
La Tonga ny Oppo Band miaraka amin'ny efijery AMOLED 1,1-inch miloko miaraka amina vahaolana 126 x 294 teboka, tady TPU miovaova raha mifidy eo amin'ny kinova mahazatra na ny andiany lamaody voafetra voafetra. Ny refy mitovy amin'izany dia 130-205 mm ary azo ovaina mba hanana perforations ampy.
Eo amin'ny farany ambanin'ny dial dia misy ny sensor tahan'ny fo, izay handrefesana haingana ny fitepon'ny fony, manampy sensor sensor SPo2 ihany koa, io dia mandrefy ny isan-jaton'ny saturation oxygen. Amin'izany rehetra izany dia mampiditra maody fanatanjahan-tena hatramin'ny 12 izy io hanararaotana sy hifehezana ireo fampisehoana fanatanjahantena tontosa isan'andro.
Ny bateria dia 110 mAh ka hanana fizakan-tena mandritra ny 14 andro amin'ny fampiasana, fa miankina amin'ny fomba fampiasanao azy, toy ny amin'ny tarika hafa. Ny brasele marani-tsaina dia afaka mifandray amin'ny fitaovana Android amin'ny alalàn'ny Bluetooth 5.0 ary hampiakatra azy io rehetra io dia mampifandray ny NFC ho fenitra handoavana vola amin'ny AliPlay ary handoavana ny fitateram-bahoaka.
SCREEN AMOLED 1.1-inch miaraka amin'ny famahana pixel 126 x 294
MAFANA SPORT 12 modes: Mandehandeha an-kalamanjana - bisikileta an-kalamanjana - bisikileta anaty trano - hazakazaka famoahana tavy - Badminton - Milomano - Milina milomano - Masinina mitaingina elatra - Fandehanana an-trano - Fampiofanana maimaim-poana - Fanofanana mavesatra - Fihazakazahana any ivelany
RAFITRA Fandraisana manokana - Mifanaraka amin'ny Android 6 sy ny avo indrindra
fehin-kibo 14/15 mm TPU - 130-205 mm
CONNECTIVITY Bluetooth 5.0 - NFC
Sela Mpandray Hafanana Accelerometer - Sensoran'ny fo - SPo2
BATERA 110 Mah
AUTONOMY 14 andro miaraka amina fiampangana iray
La Tarika Oppo dia manomboka amin'ity fotoana ity misy any Sina amin'ny tranokalan'ny orinasa Aziatika. Ny loko misy an'ny Tarika dia mainty, mavokely, mainty mamiratra, volamena ary fanontana voafetra antsoina hoe Evangelion. Ny vidin'ny Oppo Band mahazatra dia 199 yuan (eo amin'ny 24 euro eo ho eo ny fanovana) ary ny Edition Fashion dia lasa hatramin'ny 249 yuan (eo amin'ny 31 euro).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Nambara ny Oppo Band: Fehin-tànana marani-tsaina vaovao miaraka amin'ny NFC ary mizaka tena 14 andro
Ahoana ny fomba hanampiana valiny mandeha ho azy ao amin'ny WhatsApp